७० लाखको क्रेटा ४५ लाखमै ! छक्कै पार्ने गरि कसरी सम्भव भयो त ? हेर्नुहोस् यसरी भयो सम्भब – Ramailo Sandesh
नेपाल प्रहरीले चोरीका गाडी र नक्कली ‘ब्लु बुक’ बनाएर बेच्ने गिरोहलाई पक्राउ गरेर मंगलवार सार्वजनिक गर्यो । भारतबाट गाडी चोरी गरी नेपाल भित्र्याउने र नक्कली
कागजात ‘ब्लु बुक’ बनाएर बेच्ने गिरोहलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरे पछि महंगो गाडी पनि यति सस्तोमा किन पाइएको होला भन्ने कुराको अनुमान लगाउन पक्कै कठिन भएन होला ।
भन्सार छली चोरी पैठारी गरी काठमाडौँमा गाडी ल्याई नक्कली सवारी दर्ता किताबलगायतका कागजातहरु तयार गरी कारोबार हुने गरेको प्रहरी अनुसन्धानवाट खुलेको हो ।
त्यसरी सबै कागजात समेत नक्कली बनाएर भारतवाट चोरी गरेका गाडी नेपालमा बिक्रि गर्ने गरेको आधारमा ४ जना पक्राउ परेका हुन् । उक्त गाडी प्रयोग गर्ने व्यक्तिबाट अनुसन्धान गर्दै जाँदा ब्लु बुक बनाउनेलाई पनि पक्राउ गरिएको थियो ।
निरौलाको डेराबाट नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, सरकारी कार्यालयका छाप, झोला, लाइसेन्स, राहदानी लगाएतका सामाग्री बरामद गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरीले जानकारी दियो ।
पैसा तिरेपछि उनले सरकारी कागजात कीर्ते गरेर जे पनि दुरुस्तै बनाइदिने गरेका छन् निरौलाले । फार्मेसीको लाइसेन्स, एसएलसीदेखि स्नातकसम्मको ट्रान्सक्रिप्ट, सर्टिफिकेट, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट, नागरिकता, ड्राइभिङ लाइसेन्स जम्मै बनाइदिने गरेको खुलेको छ ।
प्रहरीले निरौलाको फ्ल्याटबाट ५ बोरा कीर्ते कागजात, १९१ थान विभिन्न सरकारी कार्यालयका छापका साथै विभिन्न सरकारी निकाय तथा शैक्षिक संस्थाको छाप आदि बरामद गरेको छ ।
प्रचण्डको प्रश्न के म कहिले यता, कहिले उता फर्किने ढुल्मुले नै हो त ?